Yan Aung: March 2009
ဒီမနက်ခင်းဟာ နောင်တတွေနဲ့ မိုးလင်းခဲ့ရပြန်ပြီ...
ညက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာကြောင်းတစ်ချို့ကို
ပြတင်းတံခါး တစ်ချပ် လှစ်အဟမှာ
စွန်တစ်ကောင် လေဆန်ကိုမာန်တုရင်း ထိုးတက်သွားခဲ့တယ်.
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာလည်း နိယာမအရ သေဆုံးပျောက်ကွယ်တတ်ကြတယ်.
ဒီကိန်းသေကြီးကို အသက်သွင်းပြီး ငါတို့ ရင်ခုန်စွာ ကစားနေကြတယ်.
အတ္တတစ်ချို့ ပူဖောင်းတစ်လုံးလို ပွယောင်းလာတတ်ကြသလို
မှိုင်းကုန်သွားတဲ့ မီးပုံးပျံတစ်လုံးလိုလည်း အိဆင်းသွားတတ်ကြတယ်.
မထိန်းနိုင်လို့ ပေါက်ထွက်တတ်ကြတာမျိုးလည်း ရှိရဲ့
မစိမ်းနိုင်လို့ ယိမ်းထိုးရင်း တွဲထိုင်ကြတာမျိုးလည်း ဖြစ်ရဲ့
ဘာကိုမှ မခနဲ့ချင်ဘူးလို့ ငါကြွေးကြော်နေခြင်းကိုက
တစ်စုံတစ်ရာကို အရွဲ့တိုက်နေတာများ ဖြစ်နေမလား...
ဘူတာရုံကအထွက် ကောင်းကင်ထက်ကို မော့ကြည့်မိတော့
မြင်တွေ့နေကြ တိုက်မြင့်ကြီး တစ်ပိုင်း မြူမှုန်လှိုင်းတွေအောက်
အပေါ်မှာ အထပ်မြင့်တွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်လို့.
အသံပိုင်ရှင်ရဲ့ ရယ်သံက ရင်ဘတ်ထဲက
ကိုယ့်အဖြေမှာ ပျော့ကွက်တစ်ချုိ့ တွေ့လိုက်မိတယ်.
ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲက ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ ကိုယ်က ပြန်မေးတယ်.
'တကယ်လို့ မင်းမမြင်တွေ့ဖူးတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို ခုလိုမျိုး
မမြင်နိုင်အောင် မြူတွေ ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ရင် မင်း ဘယ်လိုများပြောမလဲ' တဲ့...
ပုံစံခွက်ပေါင်းများစွာကို ရွေးချယ် စိစစ်ရင်း
ကိုယ့်အချိန်တွေ ကုန်နေခဲ့တာ တွေ့လိုက်ရတယ်.
'ကျွတ်... စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ...'
လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ခေတ္တရပ်ရင်း
'မင်းစီးထားတာ ဘယ်သူ့ဖိနပ်လဲ' လို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြန်မေးမိတယ်.
အပေါ်ကို မ၀ံ့မရဲလှမ်းကြည့်ရင်း ခပ်တိုးတိုး ပြန်ဖြေသံကြားမိတယ်.
'ခင်ဗျားရဲ့ ဖိနပ်ပျောက်နေခဲ့တာ နှစ်နှစ်တောင် ရှိခဲ့ပြီလေ' တဲ့...
မျက်နှာချင်းဆိုင်က မြင်နေရတဲ့ ငြမ်းစင်ကြီးကို မော့ကြည့်မိရင်း
'ငြမ်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရင်း ဒီငြမ်းပေါ်မှာ ငါနေထိုင်ခဲ့မိတယ်'
စားပွဲခင်းပေါ် ဖိတ်ကျသွားတဲ့ ကော်ဖီစက်တစ်ချို့က
ကိုယ့်သတင်းစာကို လှမ်းဆွဲရင်း မေးတယ်.
'ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကို ဒီလို မဆက်ဆံသင့်ဘူး' တဲ့လေ...
လက်သုတ်ပုဝါတစ်ခုနဲ့ ယုယငြင်သာစွာ သုတ်ပေးရင်း
ဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှာ ဖိနပ်တွေ လွင့်မျောနေကြတယ်.
ဒီဖိနပ်တွေနောက် တကောက်ကောက်နဲ့ လိုက်ပါနေကြတဲ့
အသင့်တော်ဆုံး ဖိနပ်တစ်ရံနောက်ကို ကိုယ်ပြေးလိုက်ဆွဲဖမ်းရင်း
ငြင်သာနူးညံ့ခြင်းမှာ အနှိုင်းမဲ့အင်အားတွေ ကိန်းအောင်းနေတယ်ဆိုတာ
စားပွဲပေါ် အသံမထွက်ဘဲ နေရာယူလိုက်တဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်က
ဒီလေဟာနယ်ကြီးထဲမှာ အင်အားအပြည့်နဲ့ ခုတ်မောင်းနေဆဲပဲ...
မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင်... ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ထင်..
ကြားဖူးကြမလားမသိဘူး. စာဆိုတော်မယ်ခွေဆိုတာလေ. သူ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ကျွန်တော် ပြန်ရေးပြမယ်နော်. သိသူတွေလည်း သိပြီးရောပေါ့..
ဆေးတံညို တညိုလောက်... ရော့သောက်တော့ပေး...
မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင်... ယူလိုက်က ကြိုက်လို့ထင်...
လှလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးဗျာ. နော်.
ရှေးခေတ်က လူပျိုကာလသားတွေ လူပျိုလှည့်တော့ အပျိုလေးတွေအိမ်ကိုသွားကြတာပေါ့ဗျာ. အဲဒီ့မှာ ဇာတ်လိုက်မလေးရဲ့ ဆီးခရစ်အက်ဒမိုင်းယား ကာလသားချော နေထက်လင်း ((အဲလေ.) ယောင်လို့. ရွာတွေမှာ သူ့ကိုကြိုက်ကြတယ်ဗျ. ဤကားစကားချပ်။)
ပြန်ဆက်မယ်ဗျာ. အဲဒါနဲ့ ကာလသားချော ကိုလူပျိုက ဆေးတံကို အထာနဲ့လှမ်းပေးသတဲ့..
ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်း သူ့ကို ကြိုက်နေတယ်လို့ ထင်ရော့မယ်. မယူလိုက်ပြန်ရင်လည်း သူ့ကိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုပြီး လက်လျှော့နောက်ဆုတ်လို့ နောက်တစ်ယောက်ဆီ ချဉ်းကပ်ရင် ကိုယ့်အမှားဖြစ်ရော့မယ်.
ကဲ. မောင်ကြီးရယ်... သောက်စေချင်တယ်ဟုတ်... ကုတင်နားမှာ ထောင်ခဲ့ပါလားရှင်ရယ်လို့... အပျိုမလေးက ပြန်ပြောတဲ့ အခန်းလေးကို ကဗျာလေးစပ်ထားတာပါ.
ငယ်ငယ်တုန်းက လှစ်ခနဲ အမှတ်တမဲ့ဖတ်လိုက်ရတယ်. ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်. ကြီးလာတော့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေခဲ့ရာက ဒီည ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပိုဒ်လေးထဲမှာ အဲဒီ့ကဗျာလေးလည်းပါလာရော... ဘလော့ဂါ အင်စတင့် (Blogger Instinct) က ဟုန်းခနဲ ထတောက်ပါလေရောလားဗျာ...
ကြည့်ပါလား.. ရေးထားတာလေးကိုက အထာလေးနဲ့. မသိရင် ဘလော့ဂါကာလသားတွေအားလုံးကိုပဲ ဆိုလိုသလိုလိုနဲ့. ရင်ခုန်သံ စက်သေနတ်ပစ်တယ်ဆိုတာ အဲလိုမျိုးပေါ့. ဘယ်သူထိထိ ထိချင်တဲ့သူထိဆိုပြီး အထာလေးနဲ့ ရေးထားတာ.
ကော်မန့်သွားရေးပြန်ရင်လည်း သူ့ကိုကြိုက်လို့ ထင်တော့မယ်. မရေးပြန်ရင်လည်း သူ့ကို ဂရုမစိုက်ပါဘူးဆိုပြီး အပြစ်တင်ရော့မယ်. အဲဒီ့ဘလော့ဂါဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော် ကိုရေခဲငှက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ သူက ဒီလိုလေး စပ်ပြတယ်ဗျ..
ပို့စ်တင်ခါ အသာတို့ ... ဖတ်ဖို့သူပေး...
ကော်မန့်ရေးက ခိုက်လို့ထင်.. မရေးပြန်က မိုက်လို့ထင်...
အဟေးးဟေးး... (အဲဒါကတော့ ကိုရင်ညိမ်းကြီးရဲ့ လက်သုံးရယ်သွမ်းသွေးသံပေါ့. ဘရိတ်အုပ်လိုက်တာပါ..)
ဂွတ်နိုက်နော် မ... (လွမ်းနေမယ်. အိပ်မက်ထဲထိ.)
(လောလောဆယ် ကျွန်တော်အတည်ပေါက်တွေ ရေးလို့ မရသေးလို့ပါ. ခွင့်လွှတ်နော် မ.)